Degmada Mubarak Iyo Shirwaynihii Abaabulka Waxbarashada. - Cakaara News
Degmada Mubarak Iyo Shirwaynihii Abaabulka Waxbarashada.
Mubarak,(cakaaranews) Isniin, 26ka, September, 2016. Waxaa ka dhacay magaalada mubarak ee xarunta degmaa mubarak ee gobolka daawa shirwaynaha abaabulka iyo diwaangalinta waxbarashada ee sanad dugsiyeedka 2009TI.
Shirwaynaha abaabulka waxbarashada oo ka ka dhacay hoolka shirarka ee magaalada mubarak ayaa waxaa hogaaminayay qaarka mid ah kaabineega degmada mubarak iyo kooxdii abaabulka waxbarashada heer deegaan ee gobolka daawa waxaana ka soo qaybgalay dhamaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada mubaarak iyo santarada hoos yimaada degmada mubaarak.
Masuuliyiinta maamulka degmada mubarak iyo kooxda heer deegaan ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada uga warbixiyay ahmiyada ay leedahay waxbarashada. Waxayna u sheegeen bulshada in ay keenaa dhamaanba caruurta gaadhay da’da waxbarashad goobaha waxbarashada ardaydii horena ku soo celiyaan fasalada ay u gudbeen. Waxaa kale oo ay bulshada ku booriyeen in ay ka faa’iidaystaan waxbarashada dadka waawayn.
Qaybaha kala duwan ee bulshada ku Dhaqan degmada mubarak ayaa sheegay in ay ka qayb-qadanayaan diyaarna u yihiin sidii loo keenilahaa caruurtooda gaadhay dada waxbarashad goobaha waxbarashada kuwii hore ugu jirayna loo keenilahaa fasalada ay u gudbeen sidoo kalena ka faa’-iidaysanayaan fursadaha waxbarasho dadka waawayn ee aan wakhtiyadii hore helin fursad waxbarasho.